I-Semalt: I-Social Media Spam Okufanele Uyazi Ngazo
Ugaxekile yiqembu elingafuneki nelingafaneleki lemiyalezo ethunyelwe kwinani elikhulu labasebenzisi be-intanethi. Abakwa-Spammers basebenzisa amasu ahlukene ekusakazeni ugaxekile njengoba befuna ukubopha abasebenzisi ekuhlaselweni ngobugebengu obuyingozi, izinhlelo ze-malware, nezinhlelo zokubambisana. U-Artem Abgarian, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uthi ngokuyinhloko ugaxekile wasetshenziswe njengomthombo wokuxhumana, kodwa manje uthathe ifomu elibi futhi kufanele lithathwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngaphandle kokuhlelwa kogaxekile kwe-imeyli ye-imeyli kanye nabezindaba zenhlalo yinkinga evamile engahlukaniswa yaba izinhlobo ezinhlanu:
Amaphrofayela we-social media nama-akhawunti:
Ama-akhawunti we-social media ama-Fake namaphrofayli ayisihluthulelo sokugaxekile. Abahlaseli badala amaphrofayili amaningi we-Facebook ne-Twitter, ikakhulukazi ngamagama nama pics amantombazane ukuheha abasebenzisi abaningi ngangokunokwenzeka - форумы онлайн казино. Bafuna ukuthola ukwethembeka nokubonakala kwamasayithi abo bese uboshwe ngezindlela eziningi. Bangase bazenze njengabadumi, osombusazwe, izibalo zomphakathi, noma ama-cricketers, futhi bafuna ukuthi uthande futhi wabelane ngokuthunyelwe kwabo.
Imilayezo enobuningi imilayezo enegama elifanayo noma umbhalo othunyelwe kubasebenzisi abaningi bezokuxhumana ngesikhathi esisodwa..Abanye abagaxekile badala ama-akhawunti amanga futhi bathumele imiyalezo emibili ngezikhathi ezithile. Bafuna ukudala ukungcola kwabasebenzisi abavumelekile noma bafuna ukuheha umuntu ngezinhlinzeko zabo nezixhumanisi ezihambisanayo. Ukusetshenziswa kwemilayezo yemidiya yemidiya eminingi yaqala ngo-2009. Ngaleso sikhathi, amanye amawebhusayithi egaxekile ahlinzeka imisebenzi abakhohlisayo ukuba bathemba ukuthi amaphrofayela wabo kanye namasayithi aqinisile.
Izixhumanisi ezinonya ziyasakazwa kwi-intanethi ngokusebenzisa imidiya yomphakathi, futhi abaduni noma abagaxekile bahlose ukulimaza, ukulimaza noma ukudukisa amawebhusayithi amaningi noma amadivaysi. Uma uchofoza kunoma iyiphi yalezi zixhumanisi, ungahle uqondiswe kuphrofayela ye-Twitter, ye-Google + noma ye-Facebook engenayo okuphathelene nokusemthethweni. Eqinisweni, abasebenzisi baphoqeleka ukuchofoza kulabo abanobugebengu nabaduni basakaza i-malware kuma-social media ukuze babambe ulwazi oluyimfihlo kanye nemininingwane yasebhange.
Imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezihlukahlukene zithengiswa kwi-intanethi, futhi indawo ethandwa kakhulu kulokhu kuyizindaba zenhlalo, yebo. Ngeshwa, awuwutholi ngaso sonke isikhathi umkhiqizo owawubona ku-pic, njengoba abahlukumezi bamane bakhokhele abasebenzisi ukubuyekezwa okuhle. Umkhuba onjalo uvumela abakhohlisi be-inthanethi ukuthi bathengise imikhiqizo eminingi futhi benze ibhizinisi labo liphumelele.
Asikho isayithi yemidiya yezenhlalo esifuna abasebenzisi bayo ukuba babelane ngokuqukethwe okungathandeki nokweqile; futhi kuyindlela yokugaxekile eyenza kahle abakwa-spammeri futhi ayiwusizo kumikhiqizo nezinhlangano ezisemthethweni. Empeleni, kuningi okuthunyelwe okungabalulekile okubikwa ku-Facebook, futhi amakhasi amaningi namaphrofayli avaliwe ukwabelana ngezinto ezingathandeki njalo ngomzuzwana. Yisenzo sokuchofoza okumele sikhishwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.